Aịzaya 65 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Jehova ga-ata ndị na-ekpere arụsị ahụhụ (1-16)
Chi Ihu Ọma na chi Akara Aka (11)
“Ndị ohu m ga na-eri ihe” (13)
Eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ (17-25)
Ha ga-arụ ụlọ, kọọkwa ubi vaịn (21)
E nweghị onye ga-arụsi ọrụ ike na nkịtị (23)
65 “Emeela m ka ndị na-ajụghị ajụjụ m chọta m. Emeela m ka ndị na-achọghị m chọta m.+ Agwara m mba na-anaghị akpọku aha m, sị, ‘Lekwanụ m, lekwanụ m!’+ 2 Ana m agbasara ndị dị isi ike aka m mgbe niile.+ Ha na-eje ije n’ụzọ na-adịghị mma,+Na-emekwa ihe ọ bụla gbatara ha n’obi.+ 3 Ha na-akpasu m iwe mgbe niile n’asọghị anya,+Na-achụ àjà n’ubi,+ na-esukwa àjà ọkụ n’elu brik. 4 Ha na-anọdụ ala n’ebe ili dị iche iche dị,+Na-arahụ ụra abalị n’ebe ndị zoro ezo.* Ha na-eri anụ ézì.+ Ofe e ji ihe rụrụ arụ* sie dịkwa n’ite ha.+ 5 Ha na-asị, ‘Nọọrọ onwe gị. Abịala m nso,N’ihi na adị m nsọ karịa gị.’* Ha na-akpasu m iwe mgbe niile.* Ha dịkwa ka ọkụ na-ere malite n’ụtụtụ ruo n’abalị. 6 A nọ n’ihu m dee ihe ndị a. Agaghị m agbachi nkịtị,Kama m ga-ata ha ahụhụ.+ M ga-ata ha ahụhụ maka ihe ọjọọ niile ha mere.* 7 M ga-ata ha ahụhụ a n’ihi mmehie ha nakwa n’ihi mmehie ndị nna nna ha mere.”+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a. “M ga-ebu ụzọ taa ha ahụhụ maka ihe ọjọọ niile ha mere,*N’ihi na ha na-esu àjà ọkụ n’elu ugwu ukwu dị iche iche,+Na-akọchakwa m n’elu ugwu nta dị iche iche.” 8 Jehova kwuru, sị: “Ọ na-abụ mmadụ hụ ụyọkọ mkpụrụ vaịn nke ga-agbapụta mmanya ọhụrụ,Ya asị, ‘Emebila ya, n’ihi na ihe dị mma* dị n’ime ya.’ Otú ahụkwa ka m ga-emere ndị ohu m. M gaghị ebibi ha niile.+ 9 M ga-eme ka otu nwa* fọdụrụ Jekọb,Meekwa ka e nwee onye si na Juda ga-eketa ugwu m.+ Ndị m họọrọ ga-enweta ya. Ndị ohu m ga-ebikwa ebe ahụ.+ 10 M ga-eji maka ndị m, bụ́ ndị ga-achọ m,Mee ka Sharọn+ ghọọ ebe atụrụ ga na-ata ahịhịa,Meekwa ka Ndagwurugwu Ekọ+ ghọọ ebe ehi ga na-ezu ike. 11 Ma unu na-ahapụ Jehova,+Na-echefu ugwu nsọ m,+Na-edozi tebụl maka chi Ihu Ọma,Na-agbajukwara chi Akara Aka mmanya a gwara agwa. 12 M ga-enyefe unu n’aka mma agha.+ Unu niile ga-ehulatakwa ala ka e gbuo unu,+N’ihi na m kpọrọ unu òkù, ma unu azaghị. Agwara m unu okwu, ma unu egeghị ntị.+ Unu nọ na-eme ihe dị njọ n’anya m. Unu họkwaara ịna-eme ihe na-adịghị mụ mma.”+ 13 N’ihi ya, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: “Ndị ohu m ga na-eri ihe, ma agụụ ga na-agụ unu.+ Ndị ohu m ga-ahụ ihe ha ga na-aṅụ,+ ma akpịrị ga na-akpọ unu nkụ. Ndị ohu m ga na-aṅụrị ọṅụ,+ ma ihere ga na-eme unu.+ 14 Ndị ohu m ga-eti mkpu ọṅụ n’ihi na obi dị ha mma,Ma unu ga-eti mkpu ákwá n’ihi na obi na-agbawa unu. Unu ga-ebekwa ákwá n’ihi na ike ụwa agwụla unu. 15 Aha ọjọọ unu ga-enwe ka ndị m họọrọ ga-eji na-abụ mmadụ ọnụ. Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova ga-egbukwa unu n’otu n’otu. Ma, ọ ga-agụ ndị ohu ya aha ọzọ.+ 16 Ihe a ga-eme ka onye ọ bụla nke chọrọ ka a gọzie ya n’ụwaRịọ Chineke, onye na-ekwu eziokwu,* ka ọ gọzie ya. Ọ ga-emekwa ka onye ọ bụla nke na-aṅụ iyi n’ụwaJiri Chineke, onye na-ekwu eziokwu,* ṅụọ iyi.+ N’ihi na ha ga-echefu ahụhụ niile ha tara.* M gaghị eji anya m ahụ ahụhụ ndị ahụ ọzọ.+ 17 N’ihi na m na-eke eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ.+ A gaghịzi echeta ihe niile mere na mbụ. Ha agaghị abatakwa n’obi.+ 18 N’ihi ya, ṅụrịanụ ọṅụ, ka obi dịkwa unu ụtọ ruo mgbe ebighị ebi maka ihe m na-eke. N’ihi na m na-eke Jeruselem ka e jiri maka ya na-aṅụrị ọṅụ. M na-ekekwa ndị bi na ya ka e jiri maka ha na-enwe obi ụtọ.+ 19 M ga-aṅụrịkwa ọṅụ n’ihi Jeruselem. Obi ga-adịkwa m ụtọ n’ihi ndị m.+ A gaghịzi na-anụ ụda ákwá ma ọ bụ ụda ákwá arịrị na Jeruselem.”+ 20 “A gaghịzi enwe nwa ọhụrụ ga-anọ naanị ụbọchị ole na ole nwụọ n’ebe ahụ. A gaghịkwa enwe agadi nke na-akaghị ezigbo nká nwụọ. N’ihi na onye nwụrụ mgbe ọ dị otu narị afọ ka bụ nwata. Ọ bụrụgodị na onye mmehie dị otu narị afọ, ọ ga-anwụ n’ihi ọnụ a bụrụ ya.* 21 Ha ga-arụ ụlọ, birikwa na ha.+ Ha ga-akọ ubi vaịn, rie ihe si na ya.+ 22 Ha agaghị arụ ụlọ, onye ọzọ ebichie ya,Ha agaghị akụ mkpụrụ, onye ọzọ erie ihe si na ya. N’ihi na ndị m ga-anọ ogologo ndụ otú osisi si anọ.+ Ndị m họọrọ ga-eji ihe aka ha rụpụtara mee ihe n’uju. 23 Ha agaghị arụsi ọrụ ike na nkịtị,*+Ha agaghịkwa amụ ụmụ mụta nsogbu,N’ihi na ha na ụmụ haBụ ụmụ* Jehova gọziri agọzi.+ 24 Tupudị ha akpọkuo m, m ga-aza ha. Mgbe ha ka kpụ okwu n’ọnụ, m ga-eme ihe ha na-arịọ. 25 Anụ ọhịa wolf na nwa atụrụ ga na-atakọ ahịhịa. Ọdụm ga na-ata okporo ọka dị ka ehi.+ Ájá ga-abụ nri agwọ. Ha agaghị emerụ ihe ọ bụla ahụ́. Ha agaghịkwa emebi ihe ọ bụla n’ugwu nsọ m niile.”+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.
^ O nwere ike ịbụ, “n’obere ụlọ ndị ha na-anọ eche nche.”
^ Ma ọ bụ “ihe na-adịghị ọcha.”
^ O nwere ike ịbụ, “N’ihi na m ga-eme ka ị dị nsọ otú m dị.”
^ Na Hibru, “Ha bụ anwụrụ ọkụ bara m n’oghere imi.”
^ Na Hibru, “M ga-awụnye ụgwọ ọrụ ha n’obi ha.”
^ Na Hibru, “wụnye ụgwọ ọrụ ha n’obi uwe ha.”
^ Ma ọ bụ “na-eme ihe o kwuru.” Na Hibru, “Amen.”
^ Ma ọ bụ “nsogbu ha niile.”
^ O nwere ike ịbụ, “A ga-asị na mmadụ bụ onye a bụrụ ọnụ ma ọ bụrụ na ọ nọrughị otu narị afọ nwụọ.”
^ Ma ọ bụ “arụgbu onwe ha n’ọrụ n’efu.”